Global Voices teny Malagasy » Poerto Riko: Vorona io… Fiaramanidina io… Aslan io! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2012 8:55 GMT 1	 · Mpanoratra Alfredo Richner Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Pôrtô Rikô (Etazonia), Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny bilaogin’  i Aslan no toera-pampirantiana zavakanto virtoaly ahitana ny asany sy ny heviny, izay mampiseho tontolo falifaly, voakaly tsara ary voaravaka loko feno hery sy hanina (tsy sakafo fa nostalgie), ary niainga avy amin’ny kolontsaina Amerikana sy Japoney mlaza. Soritan’I Enrique ho toy ny fanalan'andro ho azy sy ny mpijery azy ny asa-tanàny – ary izany mampiavaka azy izany indrindra no mampirindra ireo tetikasany isan-karazany.
Ireo andian-tsary fiaramanidina nalainy, #parraba (eo ambony), angamba no tetikasan’I Islan tena mamerovero sy manintona indrindra. Nampiasainy tamin’izany ny iPhone sy ny fitaovana fakan-tsary malaza Instagram, Fiaramanidina misidina ambony eny amin’ny habakabaka no nasehon’I Enrique –manana sary an-jatony amin’izany izy. Antonta printy ireo sary voafantina ary avy eo apetaka aminà bakoly, izay miparitaka eny amin’ny tranobe, rindrina sy ny araben’i San Juan. Asaina amin’ny alalan’ny bilaoginy sy ny Instagram avokoa ny olona handray anjara amin’ny “Scavenger Hunt”  (fihazana harembe na chasse aux trésors): mahazo dika mitovy ny olona voalohany mahita bakoly iray ary maka sary ny toerana misy izany.
Raha te ahafantatra bebe kokoa ny momban'i Aslan sy ny zavakantony, tsidio ny bilaoginy  ary araho ao amin'ny Twitter  izy.
Dika nafohezina sy nohatsaraina ity resadresaka niarahana tamin'i Aslan ity. Navoaka tamin'ny teny Espaniola ao amin'ny rohy PuertoRicoIndie.com ny dika manontolo ka azonao vakiana eto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/07/28/36109/